Oduu Ammee!Gareen mootummaa Abiyyi Ahimadiin durfamu waraana TPLFtti jaarsummaa ergate. – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsOduu Ammee!Gareen mootummaa Abiyyi Ahimadiin durfamu waraana TPLFtti jaarsummaa ergate.
Oduu Ammee!Gareen mootummaa Abiyyi Ahimadiin durfamu waraana TPLFtti jaarsummaa ergate.
Oduu Ammee! Gareen mootummaa Abiyyi Ahimadiin durfamu waraana TPLFtti jaarsummaa ergate.
Ergaan kallattiin Abiyyi Ahimad irraa Dilbata darbe karaa maanguddoota TPLF bira gahe akka agarsiisutti uummanni Tigraay yeroo ammaa loltoota mootummaa Itoophiyaa fi Shaabiyaa sochii dhorkee jira.
Kanarraa ka’uun gareen mootummaa Abiyyi jaarsummaa ergus qondaalonni Tigraay garuu hin fudhanne jedhameera.
Gama biraatiin, Waraanni Tigraayis lola taasisaa jiruun gara Maqaleetti dhiyaataa dhufeera. Warraanni garee mootummaa sodaa TPLF Maqalee qabachuu dandeessi jedhuun naannessaa magaalattii dahannoo ykn mishigii qotataa jira.
Manni Marii Amantaalee Naannoo Tigraay haala jiru kana qabbaneessuuf gareen mootummaa fi TPLF lola akka dhaaban, waraanni Shaabiyaa Tigraay keessaa akka bahu,saamichi loltoonni mootummaa Federaalaa taasisaa jiru akka dhaabbatu, waraanni Amaaraa lafa Tigraay keessaa ariitiin akka ba’us gaafatan.
Mootummaan Suudaan Gama meeshaa waraanaatiin WBO gargaaruuf qophii xumuruu Jeneraalli Cehumsaa Suudaan Abdul-Fattaah Al-Burhaan Sudaan Tv irratti Ibsa keennanii jiru. Meeshalee waraanaa dabalatee gargaarsa maallaqqafi gama barbaachisaa ta’een bira ni dhaabbanna je’ee jira. Maddi Suudaan Tv dha.
ጌዜው አሁን ነው፡፡
Dhoksa kan biraa hinqabuu jedhe #Mekonin_kebede ammoo “yeroon oromummaa itti awwaalan amma’ jedhee jira! Edaa oromoon du’eetu awwaalcha eeggataa jira!
Murteen Kan oromooti!